नयाँ वर्षमा पाठकलाई रोशनको उपहार कोष्ठकभित्रको हाँसो : RajdhaniDaily.com -
Home Not-to-be-missed नयाँ वर्षमा पाठकलाई रोशनको उपहार कोष्ठकभित्रको हाँसो
काठमाडौं । कथकार रोशन थापा ‘नीरव’ले नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्या पारेर नयाँ कथासंग्रह ‘कोष्ठकभित्रको हाँसो’ बजारमा ल्याएका छन् । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एक समारोहबीच यो पुस्तकको डा. धुव्रचन्द्र गौतम, समालोचक महेश पौड्याल र अनुपमा रेग्मीले विमोचन गरेका छन् ।
डा. धुव्रचन्द्र गौतमले रोशन थापा ‘नीरव’ पछिल्लो समयको प्रयोगवादी लेखकमा आफ्नो दर्जा बनाइसकेको बताएका छन् । पुस्तकको समालोचना गर्ने क्रममा अनुपमा रेग्मीले समग्र कथासंग्रहभित्र समकालीन चेतना र उत्तर आधुनिकतावादी कथा भएको बताएकी छन् । त्यसैगरी समालोचक महेश पौड्यालले कथासंग्रहभित्रबाट केही संवाद वाचन गरेका थिए ।
सात खण्डमा पाँचका दरले रहेका यस कथासंग्रहभित्र जम्मा पैंतीसवटा कथा रहेका छन् । शिखा बुक्सले बजारमा ल्याएको यस संग्रहको मूल्य ४ सय ७५ रुपैयाँ रहेको छ ।
काठमाडौं । बंगलादेश भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारी र बंगलादेशको प्रधानमन्त्री हसिनाबीच सोमबार आपसी...
Breaking News राजधानी संवाददाता - June 16, 2020 0
कला राजधानी संवाददाता - October 12, 2020 0
बिचार राजधानी संवाददाता - February 3, 2021 0
प्रमुख राजधानी संवाददाता - March 1, 2020 0
Breaking News राजधानी संवाददाता - January 5, 2021 0
भर्खरै राजधानी संवाददाता - June 20, 2020 0